358 Ucingo lokubiwa
Intsimbi yocingo yentsimbi
Itsheki umgangatho PVC wawutyabeka 3d panel wocingo welding
Umgangatho wokujonga i-PVC isongelwe i-3d efakwe kwi-wire mesh panel ubukhulu kunye novavanyo lwe-wire ubukhulu bocingo lwe-wire mesh: Ubungakanani be-Wire: 5.3mm Hole: 60x200mm Ubungakanani: 2000x2440mm Isiphumo: ufanelekile. ...
Zokuthunyelwa: 20 Metric itoni yentsimbi kwalenza nothango ilungele ukulayishwa kunye nonikezelo projekthi zase China
Zokuthunyelwa ngomhla wama-28, ngoJuni: 20 Metric ngetoni yentsimbi kwalenza nothango ilungele ukulayishwa unikezelo Product: Steel nothango Ubungakanani: Sika imilo, kunye yokubopha bar. ubungakanani be-variuos. Umphezulu: Hot dip kwalenza Ubume: ekulayisheni unikezelo Injongo: ukusetyenziswa eqongeni indlela yokuhamba. ...
Kwisiza sokukhangela emva kwentsimbi yethu yothango ihanjiswe kwindawo
Ngosuku olungaphambi kwezolo, iimveliso zothango lwentsimbi bezilayishe kwilori kwaye ziqala ukuba ngumthetho wokuhlangabezana nomniniyo. Imveliso: Umphezulu nothango lwentsimbi: Dip eshushu Ibalani Ingcaciso: Ubungakanani ezahlukeneyo:
Manual ukuwelda intsimbi nothango lwaso lobhedu 30x3mm uhlobo plain bar ekulayisheni inqanawa 40GP isikhongozeli Algeria 2021/6/10
Ukudibanisa ngesandla intsimbi yentsimbi ye-30x3mm yohlobo lwebha yokulayisha kwi-40GP yenqanawa eya e-Algeria 2021/6/10 Iyaqhubeka izolo, isikhongozeli sesibini se-40GP silayishwe kwisikhongozeli namhlanje kwaye siqala ukuhambisa ukudibana nomniniyo. Product: steel nothango lwaso lobhedu: intsimbi plain ...
Electro Wakha welding intsimbi nothango engenanto metal ukulayisha kwisikhongozeli kunye nokuthumela Algeria 2021/6/9
Electro Wakha welding intsimbi nothango engenanto zentsimbi kwisikhongozeli kunye nokuthunyelwa eAlgeria 2021/6/9 Isikhongozeli sokuqala somyalelo ovela kubathengi baseAlgeria kwiimveliso zentsimbi zothango zilayisha kwisikhongozeli ngoku. Kucelwa uqaphele malunga nokuthunyelwa kwabaxumi ...
Gcina uPeter Cottontail kude neyadi yakho kunye negadi
Ngelishwa, imivundla kunqabile ukuba iye kugwayimbo lokulamba, kwaye igadi yethu yeentyatyambo, igadi yemifuno kunye nembonakalo yelizwe ikunika imifuno emitsha necocekileyo. Ebusika, emva kokuba amasebe angenanto ecekeceke, umvundla ulambele yonke into enokubonelelwa sisitiya sethu. H ...
I-China PPI: I-Index yamaxabiso abavelisi-iMerail eluhlaza
Ngokwedatha yamva nje ekhutshwe yi-National Bureau of Statistics, Ngo-Matshi 2021, ixabiso lesizwe labavelisi bemizi-mveliso (i-PPI) lenyuke nge-1.6% ngenyanga, elilelona xabiso liphezulu ukusukela kwidatha yenyanga nenyanga. (2002 ukuza kuthi ga ngoku); Ngo-Matshi, i-PPI inyuke nge-4.4% ngonyaka-ewe ...
Zu nothango ikhathalogu: uhlobo oluxonxiweyo, uhlobo wagqobhoza, uhlobo grits phezulu, zu nothango kunye inshorensi uhlobo ipleyiti kunye noluhlu ubunzima fiberglass zu nothango Fibreglass nothango inesikhundla esikhulu umthwalo-ethwele, kwaye eqine kunye nokugoba amandla ingaphezulu 600Mpa. Ukukhathala ukuxhathisa malunga nama-50 amaxesha e ...
Kufuneka ndenze ntoni emva kokuba ndigonywe i-COVID-19?
Nangona uninzi lwethu lulindele ngokuxhalabileyo usuku esinokucwangcisa ngalo idinga lokuthintela i-COVID-19, olu suku lungaphambili kunoko ucinga. Irhuluneli uGavin Newsom (Gavin Newsom) uthe ukuqala kwe-15 ka-Epreli, bonke abantu baseCalifornia abaneminyaka eli-16 nangaphezulu banokwenza idinga le-COVID ...
NgoLwesihlanu, ngoFebruwari 26, 2021 nguMthendeleko weZibane kuwo onke amaTshayina. Ngumthendeleko owonwabileyo. Ngokukodwa ubusuku bunomtsalane. Ngale mini, abantu baxhoma isibane, babeke iqhina phantsi kwaso. Emva koko kuza umdlalo: qagela iqhina! Lowo uqashisela iqhina lasekunene uya ...
Ixabiso leMpahla eNsimbi ngexabiso eliSebenzayo.
Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, izinto ezinje ngomthi, isiponji, izinto zokwaleka ngemichiza, isinyithi esingenantsimbi, kwaneebhokisi zonyuka, kwaye amaxabiso ezinye iindidi ade aphindeka kabini. Umzekelo, isinyithi esingenantsimbi sikhuphuke malunga ne-50%, kunye ne-foam etofotofo ethambileyo, ebalulekileyo ...
Steel nothango, zu nothango, welding Iron Fence Factory
U-Hebei Weijia MetalMesh Co, Ltd luphando, uphuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yamashishini aphakamileyo. Singumtya wesinyithi oshukumisayo wokuqala e-China. Sinethuba lokukhuphisana kakhulu kwiintlobo ezahlukeneyo zocingo, ezinje ngocingo lwentolongo, ucingo lwesikhululo seenqwelomoya, ucingo lukaloliwe, ucingo lodwa; intsimbi g ...
Umgangatho itsheki PVC camera 3d welding wi ...
Zokuthunyelwa: 20 Metric ton of kwalenza ste ...
Kwindawo yokujonga indawo emva kwentsimbi yethu yothango ...
Manual welding intsimbi nothango lwaso lobhedu 30x3mm ...
Electro zakha welding intsimbi nothango engenanto ...